Ngathi - Ningbo Original eyongezwayo Co., Ltd.
YAMATO Umthengisi wezinto zokuqala
Ubukhulu becala sinikezela ngeYAMATO yaseJapan kuluhlu olupheleleyo lwezincedisi zodidi lwe-A.
I-Ningbo Original Accessories Co., Ltd yinkampani yokuthunga izixhobo ezihlanganisa ishishini kunye norhwebo. Le nkampani iye yasekwa iqela Chen Jiali abaye kwiminyaka engaphezu kwama-12 ukuthenga amava e Ningbo YAMATO Inkampani. Kucace gca malunga nokuthengwa kwamajelo e-YAMATO .Zingaphezu kwe-3000 iintlobo zamalungu e-Yamato kwindawo yethu yokugcina izinto, Ihowuliseyili yokuthengisa kunye nokuthengisa iJapan YAMATO accessorries yokuthunga, kunye nokubonelela ngezixhobo kwiJUKI, SIRUBA, KINGTEX kunye nakumatshini wokuthunga ophezulu. iinkampani.
Ihowuliseyili kunye nevenkile yeempahla zokuqala: YAMATO
Iivenkile ezithengisa iimpahla zeentsusa zoqobo: JUKI, PEGASUS, UMZALWANA, SIRUBA, KANSAI, KINGTEX
"Ubulungisa bukhulu kunenzuzo" kwaye "Kuphela thengisa izixhobo zokuthunga zoqobo"
Inkampani ibambelela kumgaqo othi "ubulungisa bukhulu kunenzuzo" kwaye "thengisa kuphela izixhobo zokuthunga zoqobo", sisebenzela abathengi bezinto eziphezulu zokuthenga izinto kwihlabathi liphela. Sisoloko sibeka umgangatho kwindawo yokuqala. Zonke iimpahla ziya kutshekishwa ngabasebenzi bethu bokuhlola umgangatho ngaphambi kokuba ziziswe, kwaye ziya kusiwa kuphela emva kokuba umgangatho uqinisekisiwe.
Kwixesha elizayo, sinethemba lokwenza abahlobo kunye nabenzi abangaphezulu kunye nabathengi abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukubonelela ngenkonzo yokuvelisa kunye nokuthengisa oomatshini bokuthunga abakumgangatho ophezulu kolu shishino. Kwangelo xesha, vumela inkampani yethu ibe "sisikhululo sokuthunga i-Ningbo", kwaye samkelekile kwinkampani yethu.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-5 yophuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, Ningbo Original eyongezwayo Co., Ltd iye yaba phambili China kunye nomenzi China-owaziwayo ukuthunga accessoreis. Kwintsimi ye-high-end yokuthunga ii-accessoreis, i-Ningbo Original Co, Ltd iseke umgangatho wayo ophambili kunye neempawu zophawu.
Umzi mveliso wethu uvelisa zonke iintlobo zobhedu-aluminiyam ibhola intloko izinto zokudibanisa
Sijonge ngokukodwa malunga nobulukhuni bayo yonke imingxunya yeoyile, wonke umzuzu wesikrufu kunye nawo onke amalungu, ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zinobomi benkonzo engaphezulu kweminyaka emi-3, kwaye zingqinisisiwe kusetyenziso lwangempela. EJapan naseTaiwan.Kwangelo xesha, sihlala siphuhlisa iibhola zokugqibela zokudibanisa ibhola, ukuphucula izinto kunye neenkqubo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Emva kweminyaka yokusebenza nzima, siye sanikezela nge-accessoreis kwiinkampani ezininzi zomatshini wokuthunga ophezulu eTshayina, saza senza ilogo yethu kwintonga nganye yokuqhagamshela ukubonelela abathengi ngenqanaba eliphezulu lokuqondwa kwaye bathathe uxanduva ngakumbi.
Abahloli bethu abasemgangathweni basebenze kwinkampani yeYAMATO iminyaka eli-13 kwaye baqhelene nenkqubo yokuhlola yeendawo ezahlukeneyo. Ngaphambi kokuba zonke iimpahla zigcinwe kwaye zihanjiswe, ziya kutshekishwa ngabahloli abasemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iindawo ezilungileyo zisiwe kubathengi. iinxalenye ezithunyelwe kumthengi zezokuqala kwaye zikumgangatho ophezulu.
Sinokubonelela phantse onke amalungu e-YAMATO enziwe kwilizwekazi lase-china kwaye aneentlobo ezingaphezu kwama-3000 zeYAMATO iindawo eziqhelekileyo esitokisini, iinxalenye zethu kwisitokhwe zinokunciphisa ixesha lokulinda labathengi.
Umphathi Jikelele umsunguli wenkampani yethu, uneminyaka engaphezu kwe-12 yokuthenga amava e-Ningbo YAMATO.
Umphathi wezoShishino, usebenze njengomphathi wekhwalithi kwinkampani yangaphandle kwiminyaka eyi-10, kwaye yayingqongqo kakhulu ekulawuleni umgangatho ku-Ningbo YAMATO.
Umphathi wentengiso, usebenze kumacandelo eshishini kangangeminyaka esibhozo kwaye uneqondo eliphezulu lobuchwephesha kumacandelo eshishini.
I-QC, kwishishini langaphandle elisebenza ngokuhlolwa komgangatho ngaphezulu kweminyaka elishumi, zonke iimveliso ngaphambi kokuba zinikezelwe ziya kutshekishwa ngumhloli osemgangathweni, ezingafanelekanga ziya kubuyiselwa kumzi-mveliso, siya kuthumela kuphela ezona mveliso zingcono kubathengi baseNingbo YAMATO.
Umphathi wezorhwebo lwangaphandle, uqhelene neenxalenye zeshishini langaphandle, Ukwenza abathengi baneliseke njengenjongo, zama ukusombulula iingxaki kubathengi.